China Lab-use disc-type ဂျက်စက်ရုံ QDB-50 QDB-100 QDB-150 စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ Qiangdi
Lab တွင်အသုံးပြုသော Jet Mill ကိုအခြေခံအားဖြင့် - Injectors Injectors များအားဖိအားပေးသောလေဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ ， ကုန်ကြမ်းသည် ultrasonic အမြန်နှုန်းသို့အရှိန်မြှင့်ပြီး Tangential သို့ ဦး တည်သည့်ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်း၊
Lab တွင်အသုံးပြုသော Jet Mill သည်အခြေခံအားဖြင့် - Injectors Injectors များအားဖိအားပေးသောလေဖြင့်မောင်းနှင်သည်။ ， ကုန်ကြမ်းသည် ultrasonic အမြန်နှုန်းသို့အရှိန်မြှင့ ်၍ Tangential သို့ ဦး တည်သည့်ကြိတ်ခွဲခန်းထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်း၊ တိုက်မိခြင်းနှင့်အမှုန်များသို့ကြိတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အမှုန်အရွယ်အစားကို longitudinal depth, milling pressure နှင့် material feed speed ကိုညှိခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Disc အမျိုးအစား Jet Mill သည် Gummy ပစ္စည်းများအတွက်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုပ်ဆောင်သည်
၁ ။သေးငယ်တဲ့အသုတ် Desktop ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ခွဲခန်းထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်။
2. ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ၅၀-၃၀၀ ဂရမ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၃၀၀-၁၀၀၀ ဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ စုစုပေါင်းပစ္စည်း၏ဒီဇိုင်းကိုပြောင်းလဲနေစဉ် 3-5kg အသုတ်ပင်ရှိသည်။ ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်း ကွဲပြားခြားနားသောစက်မော်ဒယ်များအသုံးပြုမှုကိုလုံးဝရှောင်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးပါ အိတ်စုဆောင်းခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာရန် mode ကို။
လှပလိုအပ်ချက်အောင်မြင်ရန် 4. ကြိမ်ကြိမ်ကြိတ်။
မော်ဒယ် amplification အချက် လေစီးနှုန်း စွမ်းရည် ကြိတ်စက်အရွယ်အစား
QDB -50 0,075 0.25m / min သုတ်2~ 60g D97,5 ~ 40um
QDB-100 ၀.၂၅ ၀.၈ သန်း / မိနစ် အသုတ် 50 ~ 300g D97,5 ~ 40um
အသုတ် 300 ~ 1000g
1 ~ 5kg အသုတ်
QDB-150 0.4 ၂ မိနစ် 10 ~ 20kg / h D97,5 ~ 4Oum
QDB-200 1 ၄ သန်း% မိနစ် 20 ~ 50kg / h D97,5 ~ 4Oum
QDB-350 ၂.၂ ၈ မိနစ် 50 ~ 120kg / h D97,5 ~ 40um
နောက်တစ်ခု: 1-10kg Capacity အတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး Fluidized-bed Jet Mill